Faylal ay wareejiyo HTC
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay si HTC
Just iibsato telefoonka HTC ah, sida HTC Mid ka mid ah X? Waxaa laga yaabaa in aad dooneysid in lagu wareejiyo files ka computer ama telefoon hore, waxa uu. Halkan, qodobkan waxaa laga sugayaa inay ka hadlaan sida loo sameeyo xal u fudud
First of dhan, waa in aad leedahay laba qalab oo faa'iido leh. Mid ka mid ah waa Wondershare MobileGo for Android (Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Waa tababare xirfad Android, kaas oo awood kuu si ay u gudbiyaan music, videos, sawiro, xiriirada, barnaamijyadooda ka computer si aad telefoon HTC si fudud. Ka sokow, waxa ay sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad si toos ah u soo bixi iyo wareejiyo barnaamijyadooda, muusig iyo cajallado fiidyow internetka si aad telefoon.
Qalab kale waa Wondershare MobileTrans , qalab kala iibsiga phone hal-click. Sidaa daraadeed, waxaad u soo wareejin karaan faylasha ka Nokia, iDevices iyo telefoon kale ee Android.
Qeybta 1: Transfer files ka computer si HTC
Qeybta 2: Koobiyee files ka Nokia / Andorid / iDevice in HTC
Qaybta ka mid ah, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso sida loo isticmaalo MobileGo for Android (dadka isticmaala Windows) si ay u gudbiyaan files badbaadiyey kombiyuutarka si aad telefoon HTC. Hadda, download software hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Fiiro gaar ah: Riix halkan si aad u hubiso info ka badan oo ku saabsan qalabka HTC taageeray, oo ay taageerayaan Android OS iyo kuwa kale.
Tallaabada 1. Ku rakib oo ay maamulaan MobileGo for Android
Bilowga aad, rakibi iyo abuurtaan MobileGo for Android on your computer. Markaas, suuqa kala xiriir booda.
Tallaabada 2. Isku telefoonka HTC in kombiyuutarka
The version Windows gelineya inaad xiriiriyaan HTC in kombiyuutarka via cable USB ama Wi-Fi. Dooro mid ka mid ah in ay isku xiraan. Ka dib markii ay ku xiran, MobileGo for Android waxaa lagu ogaan doonaa, oo tus in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 3. Transfer files si phone HTC
Hadda, si ay u soo galeeysid ka tagay. Haddii aad rabto in aad kala soo bixi barnaamijyadooda, muusig iyo cajallado fiidyow ka websites aad jeceshahay in aad telefoon HTC, waxaad riixi kartaa iskutallaabta. Daaqadda pop-up ka, imput magacyada iyo URLs websites aad jeceshahay '. Markaas, websites ka muuqan doontaa galeeysid ka tagay. Browse website kasta oo kala soo bixi barnaamijyadooda, videos iyo music. By gujinaya "Downloads" ee geeska hoose ee bidix, waxaad eegi kartaa habka dajinta.
Under aad HTC geed buugga telefoonka, waxaad ka arki kartaa astaanta badan. Riix icon kasta si ay u muujiyaan suuqa kala dhiganta. Markaas, guji "Add" ama "Import / Dhoofinta" in ay ku daraan music, barnaamijyadooda, videos, sawiro iyo xiriirada si aad telefoon HTC.
Fiiro gaar ah: MobileGo for Android kuu ogolaanaya in aad soo dhoofsadaan SMS in aad dhoofiyo si aad u computer la MobileGo for Android. Haddii aad hore u isticmaalay habab kale ama qalab inay u dhoofiyaan SMS telefoonka ee si aad u computer, laguuma ogola in ay iyaga soo dhoofsadaan si aad telefoon HTC.
Hadda, download MobileGo for Android in aad nuqulka files si phone HTC.
Wondershare MobileTrans siinayaa fursad ay ku soo wareejin files aad Nokia (Symbian) telefoonka, iPhone, iPad, iPod ama Android phone in phone HTC, oo isku click aad. Download MobileTrans ka dibna lagu wareejiyo files si HTC sida tutorial ah idin ​​Toosiya.
Fiiro gaar ah: Screenshot hoos ku saabsan files ka iPhone gudbaayo HTC yihiin. Kuwa kale waxa ay u shaqeeyaan si la mid ah. Intaa waxaa dheer, waxaad eegi kartaa faahfaahinta ku saabsan taageeray Nokia (Symbian), iDevice iyo telefoonada Android.
Tallaabada 1. Ku rakib MobileTrans oo aan bilowno
Si aad u bilaabaan oo leh, rakibi phone qalab kala iibsiga on your computer oo abuurtaan. Markaas, furmo suuqa hoose muujinaysaa ilaa.
Fiiro gaar ah: Si loo maareeyo si ay u gudbiyaan files ka iPhone in HTC, waa in aad la rakibi Lugood on your computer. Haddii aadan u lahaa, waxa ay ku rakibi hor kala iibsiga.
Tallaabada 2. Iska aad Nokia / Android / iDevice iyo HTC xiran
Markaas, xirmaan labada aad HTC iyo telefoon kale oo soo ordaya Symbian, Android ama macruufka in kombiyuutarka la fiilooyinka USB. Marka ay ku xiran yihiin, MobileTrans si degdeg ah iyaga lagu ogaan doonaa. Iyo telefoonada lagu soo bandhigi doonaa meelo ka mid ah "Source" iyo "Destination" furmo suuqa hoose sida aad ka arki hoos ka:
Waxa kale oo aad tirtiri kartaa xogta ku saabsan HTC in uu kaydiyo kuwa ka phone il adigoo sax ku off "data Clear hor nuqul".
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in lagu wareejiyo files ka HTC si iPhone, kaliya aad u baahan tahay inaad guji "Flip".
Tallaabada 3. dhaqaaq files si HTC ka Android / Nokia / iDevice
Nokia (Symbian) si ay telefoonka kala iibsiga HTC, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, music, video iyo sawiro la dhaqaajin karin.
Android inay kala iibsiga phone HTC: aad wareejin karaan barnaamijyadooda, fariimaha qoraalka ah, xiriirada, abuse wac, videos, music, sawiro.
iDevice inay kala iibsiga phone HTC: awoodaan in ay nuqul music, videos, xiriirada fariimaha, qoraal iyo sawiro si aad telefoonka HTC Waxaad tahay.
Haddii aad rabto in lagu wareejiyo hal ama laba faylasha, waa in aad uncheck kuwa aadan rabin in lagu wareejiyo. Ka dib markii in, guji "Start Copy" si ay u bilaabaan kala iibsiga faylka. Inta lagu jiro hanaanka wareejinta, waxaa idinku waajib ah in la hubiyo in labada telefoonada aad ku xiran yihiin waqtiga oo dhan. Marka uu sameeyo, waa in aad guji "OK" la dhammeeyo.
Isku day MobileTrans si ay u gudbiyaan files si aad telefoon HTC!